Isicelo - Zhejiang Estar Mechanical Co., Ltd
isicelo imveliso CFB
Le ilandelayo ezinye izicelo ezithile iibheringi CFB
Ngenxa indibanisela iipropati eziphathekayo kunye nokusebenza, iimveliso CFB ziye zasetyenziswa kuninzi kukhona kwaye kukhuthazwe ngaphezu iibheringi eziqhelekileyo self-ethambisayo xa iqatyiwe. isakhiwo Thin-enqatyisiweyo, ubungakanani elincinane, ubunzima ukukhanya, kulula ukuyisebenzisa EU kwisingxobo. Ngokusekelwe iimpawu eziphathekayo le banxibe-resistant inwebu PTFE iimveliso umxube CF yesondlo nzima ayikwazi refueled okanye kunzima ukuba imane, akukho ukusifaka oyile kunye izihlandlo oyile ukuthambisa ajikeleze ngaphantsi. Ngexesha ukusetyenziswa, umxube PTFE yakha umboniso transfer ekhusela umngxuma ilitye lokusila ukuba ezilumayo. ulwazi lwendibanisela yamaqabane PTFE ukumelana esihle kukuwohloka inani elisezantsi kunobunye, kwakunye ngokulinganisela elasto-plasticity, nto leyo isasaze uxinezeleko lonke kwindawo zoqhagamshelwano ngokubanzi kwaye ngaloo ndlela kwandisa umthwalo umbane iimveliso EU (bona). Ngoko ke, iimveliso EU ifanele ezijikelezayo, Swing, yezihlunu ukutyibilika kunye nezinye izihlandlo.
Izicelo gumbini kule zequmrhu ziquka:
umcephe wokunyusa, waqhekeza, sihla clutch, indlela uhlengahlengiso esipilini, wiper, indlela window lift, indlela evala, kwi desktop, ucango yokutshixa ucango lomnyango, indlela isihlalo ibhanti tensioning, indlela uhlengahlengiso isihlalo, isiBeki, isiqu, iihenjisi, othe tye intonga kunye nentloko ibhola, umcephe wokunyusa, steering, steering, intsimbi tyheli njalo njalo.
oomatshini lwezolimo kunye noomatshini ukutya
Iitrektara, ukudibanisa abavuni, aronte (ingca, iindiza, njl); aronte, izixhobo processing inyama, iitapile abavuni, sprayers, notsala okuziinkozo, izityalo yokutyala, izixhobo iyasondela, njl
oomatshini Construction, oomatshini izithuthi
ukumbiwa hydraulic, iilifti hydraulic, ngabenzi eziphathekayo, iilori ifolokhwe lift, iisilinda hydraulic, tensioners bhanti, milenge, iilori udaka, forklifts pallet, iilifti womoya, Oogandaganda, escalators, izixhobo zokuxuba alulwelo, kwicala ukulayisha kunye noomatshini ukothula.
zasendlini, izixhobo zorhwebo, izixhobo esibhedlele
Umoya, bokutshayela, nowezitya, oomatshini bokuthunga, oomatshini bokuhlamba, iifriji, oomatshini bokufotokopa, oomatshini bokushicilela, yabavavanyi, iinkqubo imeyile processing, ileta ukuhlela izixhobo, izixhobo wamazinyo, izixhobo X-ray, iitheyibhile zokusebenza kunye like.
Iibhayisekile, izithuthuthu, izixhobo, umphunga Ntambo Machine, Buyisela wabona, umatshini Gerong, umatshini textile, umatshini ukunitha, umatshini iqhosha, inkqubo ukupakishwa, wayibethelela izixhobo oomatshini, izixhobo lokuvelisa yeglasi.
CFB sleeve idla kucetyiswa ukuba umsebenzi uveza kunye nokusingqongileyo ukuthambisa ajikeleze umda, ingakumbi yazala yoyilo umngxuma ngaphakathi, okulungileyo zihlandlo yokugalela amafutha ezithuthi hayi rhoqo okanye kuphindwa, kodwa iimeko non-yokuqaba, CFB Ubude emkhonweni uxhomekeke ngokuzala, isantya komhlaba , iqondo lobushushu kokugquma ethile kunye nezinye iindibano. Kwangaxeshanye, umphezulu engaphakathi umaleko kumkhono seplastiki kungashiywa kwinkqubo sukube ngaphambi kokuba azakhele, unako-hlulwa libe kwesihlalo emngxunyeni ukuya ubungakanani indibano engcono.
iimpompo Gear, iimpompo, iimpompo piston, izivingco ibhola, izivingco ibhabhathane, izivingco okuxuba, izivingco ulawulo, Buyisela isiguquli, iziqhoboshi hydraulic, compressors centrifugal, iisilinda hydraulic.